» प्रधानमन्त्री केपि ओलिले (रअ)प्रमुख सग गोप्य रुपमा भेटघट गरि कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको भन्दै साझा पार्टिको आपत्ती! हेर्नुहोस प्रधानमन्त्री केपि ओलिले (रअ)प्रमुख सग गोप्य रुपमा भेटघट गरि कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको भन्दै साझा पार्टिको आपत्ती! हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
प्रधानमन्त्री केपि ओलिले (रअ)प्रमुख सग गोप्य रुपमा भेटघट गरि कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको भन्दै साझा पार्टिको आपत्ती! हेर्नुहोस
काठमाडौ १२ कार्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार राति बालुवाटारमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखलाई नराखीकन गोयलसँग भेटघाट गरी कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेका हुन्।